Dardaarankii Aabo - Qalinkii Muxammed
Waxa uu ku bilaabay isagoo ka sheekaynaya xaaladihii ugu danbeeyay ka hor intaanuu aabihii geeriyoon, wuxuu ku bilaabay isagoo leh: Sidii caadada ii ahayd waxaan imid gurigayagii, waxaan dareemay markiiba inaanuu jawigu sax sanayn, mugdi badan iyo aamusni ayaa ha dheeyay reerkayagii farxada badnaa! Intaa kadib waxaan soo galay gudaha guriga, waxaan arkay Waalidkay, aabahay oo aad u liita xanuun dartii. Waa uu ii yeedhay isagoo le: kaalay wiilkaygiiyow. Waan soo ag fadhiistay, waxa uu intaa ii raaciyay, i dhagayso wiilkaygiiyow, maanta waxaan u malaynayaa inay tahay maalintii iigu danbaysay noloshadayda ee sadex arimood may samayn kartaa? Anigoo aad u murugaysan ayaan ku idhi Haa Aabo sheeg maxaan kuu qabtaa. waxa uu soo saaray intaa kadib saacad aad u gabawday, waxa uu igu yidhi saacadan qaad aabo oo waxaad ku meherada ugu horaysa ee aad aragto dadka fadhiya waxaad waydiisaa, Saacadan imisaad iga siisanaysaan.
Anigoo yaaban ayaan idhi waayahay Aabo, waxaan imid meheradii ugu horaysay oo ahayd meel makhaayad ah, waxaan waydiiyay dadkii joogay qiimahay saacadan iga siisan lahaayeen. Markay arkaan siday u da’wayntahay kii ugu badnaa wuxuu yidhi waxaan kaa sii sanayaa 5 laa 10 Dollar inta u dhaxaysa! Waan ka imid anigoo kusoo noqday Aabo si’aan jawaab ugu celiyo. Waxaan usheegay wixii goobta ka dhacay.
waxa uu yidhi wiillkaygiiyow hada waxaad u gaysaa tukaanka ugu horeeya ee saacadaha lagu sameeyo, su’aashii oo kalena waydii kadibna igu soo war celi haka iibine. Wiilkii isagoo isle saacadlaha ayaa wax dhaanta ku odhan oo lacag yara badan kusiin, ayaa u keenay dukaankii ugu horeeyay. Saacadlihii wuxuu isna ku yidhi, inta u dhaxaysa 10 illaa 20 dollar aan ku siiyo. Wiilkii isagoo yaaban oo is waydiinaya aabo muxuu uga jeeda arintan, saacadan gabawday cidna waxba kuma falayso’e, ayaa wuxuu kusoo noqday Aabihii, arintii dhacdayna wuu uga waramay.
Aabihii wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyow waxaad samaysaa oo ah codsigii ugu danbeeyay, saacada qaad markale oo waxaad gaysaa madxafka kuugu dhaw ee kaa soo hor baxa, su’aashii oo kalena waydii, qiimaha ay saacadan kaa siisan lahaayeen. Wiilkii isagoo iska niyad jabay ayuu yidhi waayahay Aabo hadii aad adigu codsatay waan samaynayaa. Waxaan soo galay ayuu yidhi madxafkii iigu dhawaa, shaqaalihii iigu horeeyay ee iga soo hor baxa ayaan su’aashii waydiiyay. Waxay ahayd gabadh, waxay tidhi isoo raac, waxbay eeg-eegtay kadib ayay u yeedhay shaqaale kale, shaqaalihii ayaa isna eegay, waxa uu isaguna u yeedhay laba shaqaale oo kale iyo Ninkii maamulaha ka ahaa goobta. Iyagoo dhoola cadaynaya ayay igu yidhaahdeen saacadan hadaad iibinayso, waxaan ku qiyaasaynaa 1 milyan ilaa 2 milyan oo dollar. Hadaad hada ka tagaysana hadaan gacanta kaa saaaraynaa lacagta! Isagoo wiilkii aad u yaabay ayuu yidhi waad mahadsantiin ee saacadayda isiiya!
Waxa uu kusoo noqday Aabihii isagoo yaaban, waxaanuu u sheegay wixii goobtaa ka dhacay. Aabihii oo ahaa Nin xikmad le baa yidhi wiilkaygiiyow, Dadku waa intaas, intaad nooshahayna waxaad la kulmi doontaa kuwo badan oo sidanoo kale ah. Qayb ka mid ah dadkani waa kuwo aan garanayn qiimahaaga, oo way ku yasi doonaan kuna tix galin maayaan, waayo ma’oga runtii qofkaad tahay. Markay dusha kaa arkaan ayuunbay bilaabayaan inay wax qaldan kaa aaminaan waxaana ugu wacan arintaas aqoon aanay adiga kuu lahayn iyo deg-deg, kuwaasi markasta dhaawac ay kuu gaystaan ayuunbaad kala kulmaysaa. Qayb kalena waa kuwo garanaya qiimahaaga iyo waxaad tahay, waxayna kuula dhaqmayaan si kasoo horjeeda kuwa kale, oo tixgalin iyo ixtiraam ayay ku siinayaan. wiilkaygiiyow wuxu yahay dar-daarankaygu markaa inaad markasta ka yeesho hareerahaaga kuwa garanaya qiimahaaga, kuula dhaqmayana sidaad tahay. Marnaba haka ag dhawaan kuwa aan ixtiraamka lahayn ee aan ku garanayn, Hadaad sidaa yeesho waxaad ku noolaan doontaa nolol farxad iyo rayrayn badan.